Flint Hills Hideaway eAlma, Kansas
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguHeather
Ukusaba okufihliweyo kwiFlint Hills yaseKansas. Le ndawo yokuzimela ibekwe kakuhle ibekwe phantsi kwesitudiyo se-yoga kwindawo yokugcina amatye embali e-Alma, "IsiXeko seLitye leNative". I-Flint Hills Hideaway inokuba sisiseko sekhaya lakho ukuze ufumane inkcubeko yendawo yokufuya, ubugcisa kunye nokutya. Nokuba le yiholide okanye "yokuhlala", indawo yakho yokungena yabucala ikhokelela ngqo kwi-condo yakho konke okuza kwakho kunye nokuhamba.
Fumana intuthuzelo kwimvakalelo yoxolo apha.
Igumbi elinye lokulala linebhedi enkulu.
Indawo yokuhlala ineesofa ezimbini eziguquka zibe ziibhedi:
-Isofa #1 iyindlovukazi enomandlalo okhululekileyo.
-Isofa #2 yindawo yokulala ye-futon enye.
4.98 ·Izimvo eziyi-53
Hamba kwiindlela ezibukekayo kwaye uya kufumana iindonga zamatye ezihla zinyuka zisehla iinduli, zikhumbuza i-British Isles.
Ixesha lasentlakohlaza ukusuka kuMatshi ukuya ku-Epreli lidume kwi-KS Flint Hills ngokutshiswa kwamadlelo ngonyaka, inkqubo yonyaka yohlaziyo olukhawulezisa ukubuya kwezondlo kumadlelo.
Ihlobo laziwa ngokunqumla ilizwe ibhayisekile kunye nokhenketho lwesithuthuthu ukutyhubela ummandla, kunye nomboniso we-4H wesithili, kunye nomsitho wonyaka we-Hot Alma Nights, umbhiyozo weemoto ezikufutshane nakude.
I-Fall iyaziwa ngee-vistas ezingapheliyo zengca ende yegolide, kunye nemiboniso yobugcisa ebhiyozelwa kwiVenland ekufutshane yaseVolland, iNdawo yoBugcisa kunye noLuntu, imizuzu eyi-15 kuphela kwintshona ye-Alma.
Ukutya kumgama wokuhamba: IAlma Bakery kunye neShoppe eSweet, i-El Corral Mexican Restaurant, iGambino's Pizza, kunye neBar kaDJ ye-pub grub elungileyo.
Ukutya okuqaphelekayo ngaphakathi kwidrayivu emfutshane: Flint Hills Smokehouse e Maple Hill, KS.
Umnini uhlala iikhilomitha ezi-2 ukusuka kwipropathi, kwaye unokufikelelwa nge-imeyile kunye / okanye umnxeba emva kokuba ugcino luqinisekisiwe.